Sivivinye izesekeli zikaHama "Abathonya" Izindaba zamagajethi
Sivivinye izesekeli ze-Hama Influencer
UMiguel Hernandez | | Izesekeli, Gadgets
Okuqukethwe okuningi kukhiqizwa kusuka kumaselula futhi nakho kudliwe ngomakhalekhukhwini. Sizokutshela imfihlo, amavidiyo wami kanye nokuhlaziywa kukhiqizwa nge-smartphone, futhi uzozibuza ukuthi yini iqhinga lokuthola umphumela omuhle kangaka, ngoba sisebenzisa lolu hlobo lwe izesekeli.
U-Hama wethule uchungechunge lwemikhiqizo eyenzelwe ukuthi wenze okuqukethwe kwakho okuhle kakhulu ku-Instagram, YouTube noma lapho uthanda khona. Thola nathi ukuthi iziphi izesekeli ezibalulekile, ukuthi zisebenza kanjani nokuthi kungani kufanele zibe yingxenye yakho isethaphu ukuthola imiphumela yobungcweti.
1 Indandatho yokukhanyisa ye-LED
2 Imakrofoni ye-lavalier yemiphumela emihle
Indandatho yokukhanyisa ye-LED
Lokhu ngokungangabazeki yilokho okubonakala kimi kubaluleke kakhulu kuyo yonke imikhiqizo esiyihlaziya namhlanje. Amasongo wokukhanya we-LED eze ukuxazulula inkinga ngaphambi kokuthi sixazulule ngamalambu amakhulu futhi amakhulu, manje esikhaleni esincane sinakho esikudingayo.
Lezi hoops ze-LED sivumele sikhanyise ubuso bethu noma umkhiqizo esiwuhlaziyayo, enikeza ukuthi kungenzeka ukuthi konke kubonakale ngokusobala futhi ngaphandle kwezithunzi, ngaleyo ndlela kutholakale umphumela wobungcweti, kugxilwe ngaphambili okubalulekile, futhi kushiye ubumnyama nomsindo esithombeni ngemuva.
Ngokukhethekile iringi i-Hama LED light ring Ikhipha ukukhanya kwasemini okufika ku-6000K, futhi kungenziwa kufiphazwe ngokuqhubekayo. Ukulahlwa kwe Ama-LED angama-128 Futhi ngokumangazayo, inesisindo esincane futhi iyagoqeka, ngakho-ke sizokuhambisa kalula esikhwameni sayo esifakiwe.
Bona ishidi lemininingwane yomkhiqizo: LINK
Inendandatho engu-10,2-intshi futhi ifaka ukwesekwa okuhanjiswa phakathi nendawo okuzosivumela ukuthi sibe ne-smartphone yethu kalula. Sinembobo ye-USB kanye ne-knob yokulawula ezosivumela ukuthi siyilungise, futhi kufaka ne-opharetha ye-Bluetooth ukuze sikwazi ukulungisa ukurekhoda.
Singanweba ihupu lifike kumasentimitha ayi-138, ubude obuncane bube ngama-52 cm. Kungimangazile ukuthi ngenxa yokuma kwayo nokuthutha kwayo besingakusebenzisa njengesibani. Lokho kuzoncika kuwe, kepha kulungile kuma-unboxing, ama-makeup tutorials nama-blogs evidiyo.
Ngakolunye uhlangothi, njengenzuzo esinayo yokuthi singakwazi ukutshekisa iringi ngezindlela eziningi. Ekuvivinyweni kwethu kusebenze kahle futhi amathoni amathathu ombala angaphezu kokwanele ukuthola imiphumela emihle ngokujwayelekile. Lezi zinhlobo zamalambu zilungele ukuqoshwa. Lo mkhiqizo usendaweni yakho ejwayelekile yokuthengisa kusuka kuma-euro angama-69,00.
Imakrofoni ye-lavalier yemiphumela emihle
Ngemuva kokukhanyisa, umsindo uyinselelo enkulu yesibili yabathonya. Lapho sifuna izixazululo zaleli khanda, ezikhathini eziningi sithola izinketho ezibiza ngokweqile noma ezinkulu, kepha-ke, isipiliyoni singitshela ukuthi kungaphezu kokwanele umbhobho omuhle we-lavalier.
Kulokhu uHama naye uyaphuma ayohlangabeza owakhe I-Smart Lavalier, imakrofoni ye-lavalier eyenzelwe ama-PC, amakhamera namaselula, ehambisana ngokuphelele nakho konke. Inobude bekhebula obungamamitha ayisithupha, into ephawuleka ngokukhethekile.
Lo makrofoni unebanga lemvamisa eliphakathi kuka-50 Hz no-20 KHz kanye ne-impudence ka-2200 Ohm. Njengoba kungalindelwa ngenxa yokuma kwayo namandla ayo, sibhekene nombhobho oqondisa omni, okusho ukuthi, ngeke kudingeke ukuthi siwubeke ngendlela ekhethekile ukuze uthwebule kahle imisindo yethu.
Ishidi ledatha yomkhiqizo> LINK.
Ukuze sinembe kakhudlwana, sinokuzwela kwe- I-45 dB nasekuvivinyweni kwethu kuthuthuke ngokumangazayo. Ngaphezu kwalokho, ngikutholile kuhlukile ukuthi lo makrofoni unebhethri kanye nesilawuli esivumela ukuthi siyilungise kuwo womabili amakhamera nama-smartphone (ngaphandle kokusebenzisa ibhethri).
Inesigqoko esincane esivimbela imisindo ecasulayo nomoya kanye nesiqeshana esincane Esingayimisa ngayo ehembeni lethu noma lapho sifuna khona kalula, lokhu kukhululeke kakhulukazi futhi kungokwanele abantu abaningi, okungukuthi, ingabe kufanelekile ukutshala imali ngamakhulu ama-euro?
Lo mkhiqizo usungulwe yi-Hama ngama-euro angama-34,95 kuphela futhi izotholakala ezindaweni ezijwayelekile zokuthengisa. Imakrofoni ye-Hama Smart Lavalier lavalier ingumngane ofanele kulabo abadinga ukukhiqiza ividiyo ye-YouTube noma batshele abakuthengile ku-Instagram: imakrofoni eqondisa omni ikakhulukazi efanelekile ukuqoshwa kwezwi namavidiyo.
Umkhiqizo wesithathu omuhle wosuku lwethu nosuku njengo abathonya Ngaphandle kokungabaza i-tripod, noma ngabe usashiya ukuphumula kweselula yakho ebhokisini lezicathulo?
Ndoda, i-tripod iyadingeka impela futhi le ndlela uHama akunikeza yona ilungile. Le tripod inokuphakama okungenani okungu-20cm nokuphakama okuphezulu ngengalo yayo ye-telescopic engekho ngaphansi kwamasentimitha angama-90, okungukuthi cishe imitha elilodwa, uinduduzo yangempela.
Ikhiqizwa ngengxube yepulasitiki ne-aluminium, kepha kufanele sigcizelele ukuthi ingxenye engezansi inayo nenjoloba engasheleli ebomvu ebomvu esisiza kakhulu lapho sibeka i-tripod lapho sifuna khona. Isisindo esiphelele se-tripod ngama-gram ayi-185 kuphela, into esishiye isimanga ngisho nathi.
Sibheka ukuthi sinama-adaptha wokusebenzisa i-tripod enamasistimu amathathu ahlukene: i-GoPro, i-smartphone enokuxhaswa okwandekayo nekhamera yevidiyo yendabuko. Imiphumela mihle futhi umkhiqizo uzinze kakhulu ezivivinyweni zethu, into ebongwa ngobuqotho.
Kodwa-ke, sinenye futhi i-tripod ekhethekile yabathonya, i- i-hama tabletop tripod Iqukethe imilenze emithathu yokusekela kanye namakhanda amabili kanye nomnikazi we-smartphone, kanye Izingxenye ezi-4 eziguquguqukayo ngokusebenzisa umshini wokuhamba we-latch, ngokucindezela inkinobho ngaphakathi kwemilenze ye-tripod. Izinyawo zayo zenjoloba zinamathela ngokuqinile ezindaweni ezibushelelezi, ezishelelayo nezingalingani, kuyilapho izinga lazo lamabhamuza lihlanganiswa nekhanda lezintathu. Ingasetshenziswa zombili njenge-monopod noma njenge-tripod. Into enhle kunazo zonke ukuthi uma isongwe ayisithathi isikhala: nge ukuphakama okuncane kwamasentimitha ayi-16 (ubuningi be-19) nesisindo esingu-260 amagremu, ingathwalwa esikhwameni sakho noma kubhaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Sivivinye izesekeli ze-Hama Influencer